Ciidanka bileyska ee gobolka Bari oo hawlgal dad lagu soo xirxiray ka fuliyey magaalada Bosaaso. – Radio Daljir
Bossaso, June, 13 – Waxaa saaka ka dhacay magaalada Bossaso hawl-gal ay sameeyeen ciidamada booliska ee Puntland ee gobolka Bari, kaas oo laga fuliyey dhawr goobood oo ku yaalla magaalada sida agagaarka suuqa weyn, wadada dheer ee Net-ko, waddada laamiga ah ee dhex marta magaalada iyo qaar ka mid ah xaafadaha.
Waxaa saaka lagu arkayey gudaha magaalada Bossaso baabuurta maxaabiista qaadda ee shabaqlaha loo yaqaan oo ay saran yihiin dad la qab-qabtay,gawaarida kale ee ay ciidanku isticmaalaan iyo ciidammo dhex lugaynaya magaalada.
Sida uu Daljir u sheegay sarkaal diiday in magaciisa la xigto waxaa u hawl-galkani la xiriiray sugidda ammaanka magaalada Bossaso, waxaa lagu soo xiray dad badan oo lagu aruuriyey saldhigga bartamaha ee magaalada halkaas oo lagu kale shaan dhaynayo, si loo kale saaro dadka la raadinayo ee la tuhunsan yahay iyo kuwa ku dhex khaldamay. Sarkaalku waxa uu sheegay in qaar ka mid dadkaasi la siidaayey inta hartayna la baarayo.
Arrintaan ayaa imaanaysa iyadoo xalay magaalada Bossaso lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada daraawiishta ee dawladda Puntland, mana jiro illaa iyo hadda war la xiriira hawl-galka saaka oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee Puntland.